Baarlamaanka Soomaaliya muddo labo maalmood ah o qabtay R/wasaaraha cusub in uu ku horyimaado. – Radio Daljir
Baarlamaanka Soomaaliya muddo labo maalmood ah o qabtay R/wasaaraha cusub in uu ku horyimaado.
Oktoobar 14, 2012 1:38 g 0
Muqdisho, Oct 14 – Mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka ayaa maanta kulan ku yeeshay aqalka ummadda ee magaalada Muqdisho, kaasoo looga dooday arrimo dhawr ah oo ay ugu mug weynayd tubraaca xildhibaannada Soomaaliya ay ku shaqaynayaan muddada 4 sanno ah xil-hayntoda.
Fadhiga wakiillada ee maanta, waxaa sidoo kale loogu qaybiyey xeer-hoosaadka cusub ee ay ku shaqayn doonaan xildhibaannada, kaasoo lagu wargaliyey in ay maalmo kooban uga soo baaraan-degaan kaddibna laga doodi doono xalaalayntiisa.
Isla fadhiga wakiillada dawladda federaalka ee maanta, waxaa sidoo kale lagu guddoonsaday muddo ku siman labo maalmood gudahood R/wasaaraha cusub in uu ku horyimaado baarlamaanka si loogu dalbo siinta kalsoonidooda.
Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sh. Cismaan Jawaari, ayaa fadhigaasi maanta ku daah-furay khudbad miisaanleh oo taabanaysay marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray muddadii burburka, soo kabashada hadda muuqata iyo wax la gudboon maanta mudanayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan si looga dhabeeyo hirgalinta hannaanka lagu dhidbayo dawladnimo dhab oo ka hanaqaada gayiga Soomaaliyeed.
Md. Jawaari, waxaa uu ku celceliyey lagama maarmaanimada in la birataaro bidhaanta qaranimo ee hadda soo iftiintay, lana soo nooleeyo rajadii bulshada Soomaaliyeed ee quusta ka gaartay qaranimo dib u soo laabata.
Dhinaca kale xildhaannada baarlamaanka oo guda-galay ajandayaashii horyaallay ayaa iyana si hoose ugu daadagay dulucda qodobadii miiska u saaranaa, waxayna afhayeenka la wadaageen aragtidooda arrimaha loo soo gudbiyey iyo sida ay tahay loo maareeyo.
Waxaa ka hadlidda mawduucyadaasi isku-diiwan-galiyey illaa 34 mudane, inkastoo ay madasha ka hadleen illaa 29 xildhibaan oo soo gudbiyey, fikir, talooyin iyo tusaalayaal la xiriira ajandaha iyo sidoo kale sidii looga weecan lahaa dhibo horay u ragaadiyey baarlamaanno kan ka horreeyey.
Biyo yari laga soo sheegayo degmada Rako ee gobolka Karkaatr
Kulan khadka telephone-ka ah oo uu kasoo qayb galay R’wasaaraha dawlada FS oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo.